Die Casting, Aluminium Sand Casting, fametrahana mazava Cnc Machining - Innovaw
Ningbo INNOVAW mekanika CO., LTD matihanina no mpanamboatra ny fanariana sy machined ampahany be izay ampiasaina ho an'ny Automotive, Medical, earthmover, solika, jiro sy ny jiro Indostria. Ny fanokanana in maharitra raharaham-barotra amin'ny mpanjifa vahiny avy any Amerika Avaratra sy Eoropa andrefana, isika dia tsara ny mahafantatra izay ny fitakiana ny mpanjifa rehefa manome sary sy ny famaritana ara-nofo. Ary ny injeniera dia afaka soso-kevitra tsara indrindra dingana sy ny teknolojia mba hanao ny singa na famolavolana miova raha ilaina. Indrindra ny vokatra dia naondrana tany Kanada, Etazonia, ary ny andrefana Eoropa Alemaina, Frantsa, Italia, Norvezy, Failandy, Soisa, sns ary handresy tsara laza eo amin'ny mpanjifa.
Ningbo INNOVAW maty fanariana dia izao tontolo izao ny mpitarika ao amin'ny fanariana ny maty fametrahana mazava tsara ny zinc, VIRATY SY magnésium alloys. View tranga fampianarana avy amin'ny orinasa isan-karazany miaraka amin'ny hevitra ho fanatsarana singa fototra amin'ny alalan'ny fanariana faty.
TS16949 isika sy ISO14001 fanamarinana ara-panjakana.
professinal mpanamboatra ny maty fanariana tooling, tsindry ambony maty fanariana, aluminium fanariana ny fahamaotinana, ny tsindry ambany maty fanariana, fametrahana mazava tsara CNC machining efa ho 20 taona.